Nkesa Linux dị oke nfe 10 dị arọ maka kọmputa ochie | Akụkọ akụrụngwa
Ikesa Linux fechaa
Flicker: Susant Podra
N'agbanyeghị uru ndị ọrụ sistemụ Linux na-enye anyị, taa ọ na-esiri ike ịchọta ngwaọrụ ejirila nzọ na-enweghị isi. Afọ ole na ole gara aga, Mozilla nọ na-arụ ọrụ ngo iji wepụta sistemụ arụmọrụ Linux maka smartphones, mana agbahapụla usoro ahụ na-akwado ya na mbụ iji hụ na ọ nweghị ebe ọ bụla na usoro ihe eji eme mkpagharị ugbu a, ebe iOS na gam akporo bu ndi eze.
A na-ahụkarị Linux site na imeghari na igwe ọ bụla, n'eziokwu, anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ nke nkesa na ahịa maka ụdị kọmputa ọ bụla, n'agbanyeghị afọ ole na mbipụta. N’isiokwu a anyị ga-egosi gị 10 nke nkesa Linux kachasị mma maka kọmputa ochie.
N'ime ndepụta a, ọ bụghị ihe niile dị, ma ọ bụghị ha niile dị, yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ inye onyinye gị, a na-akpọ gị ịme nke a n'isiokwu a. All distros na m zuru ezu n'okpuru A na-ahazi ha dịka ihe kacha nta dị mkpa maka nke ọ bụla, iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịchọta nke ga-enwe ebe ka mma na kọmputa ochie anyị, nke anyị nwere n’elu kọlọtọ, ma ọ bụ n’ime ụlọ ebe a na-edebe ihe n’ihi na ọ dị nwute ịtụfu ya.
1 Linux Puppy
1.1 Nwa nkita Linux chọrọ
2.1 Ihe Knomix chọrọ
3.1 Porteus chọrọ
4.1 TinyCore chọrọ
5.1 Obere ihe AntiX chọrọ
6.1 Lubuntu chọrọ
7.1 Ihe chọrọ Xubuntu
8 Ube OS / Clementine OS
8.1 Ube OS chọrọ
9 Osiso os
9.1 Elementary OS chọrọ
10.1 Linux Lite chọrọ
Puppy Linux bụ otu n'ime nkesa na-achọ obere akụrụngwa iji rụọ ọrụ nke ọma. Na-enye anyị gburugburu desktọọpụ dị iche iche, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ngwa ndị arụnyere na mgbakwunye na ịnweta ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị iji dozie ụdị obi abụọ ọ bụla na arụmọrụ ya ma ọ bụ nrụnye. Ọ na-enye anyị ohere ịmalite PC anyị site na CD ma ọ bụ pendrive, na mgbakwunye na ịnwe ike ịwụnye ya na draịvụ ike nke kọmputa anyị. Pudị puppy Linux kachasị dị ọhụrụ bụ nọmba 6.3.
Nwa nkita Linux chọrọ
486 ma ọ bụ karịa nhazi.
64 MB Ram, 512 MB kwadoro
Budata Nwa nkita Linux
KNOPPIX bụ mkpokọta nke ngwanrọ GNU / Linux, na-agbazi kpam kpam site na CD, DVD ma ọ bụ draịva USB. Na-akpaghị aka ịchọpụta ma dị dakọtara na ọtụtụ ndịna na-ese ihe ntanetị, kaadị ụda, ngwaọrụ USB na ngwaọrụ ndị ọzọ. Kwesighi ịwụnye ihe ọ bụla na draịvụ ike. Versiondị a na-enye anyị ọtụtụ ngwa n'etiti nke anyị hụrụ GIMP, LibreOffice, Firefox, ọkpụkpọ egwu ...
Ihe Knomix chọrọ
Ihe nhazi 486
120 MB nke Ram, 512 kwadoro ma ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ na ọtụtụ ngwa.
Naanị 300 MB, Portus na-enye anyị ohere ịhọrọ n'etiti gburugburu eserese dị iche iche dị ka MATE, Xfce, KDE ... A na-akpọ nsụgharị mbụ nke Porteus Slax Remix, aha ahụ nwere ike ịmara gị nke ọma. Ọ bụ ezigbo maka ufọt ufọt 90s kọmputa n'ihi obere ihe ọ chọrọ. Ọhụrụ version dị bụ nọmba 3.2.2 nke e wepụtara na December nke afọ gara aga.
256 MB Ram eserese gburugburu ebe obibi - 40 MB na ọnọdụ ederede
Tinycore bụ nkesa na-eji kernel Linux na ndọtị nke obodo mepụtara. Ọ na-enye anyị ebe dị iche iche eserese na akwadoghị maka ndị ọrụ chọrọ ịbanye na Linux,, ebe ọ bụ na nwụnye dịtụ mgbagwoju karịa na mbụ. N'oge usoro nwụnye, anyị nwere ike ịhọrọ ngwa ndị anyị chọrọ ịwụnye na ndị na-abụghị. Mana nhọrọ a pụtara na nwa afọ anaghị etinye ihe nchọgharị ọ bụla na nhazi okwu. Ọ bụ ezie na aha ya nwere ike igosi ma ọ bụghị, TinyCore dị mma maka ndị ọrụ ahụ niile na-achọ ịhazi ụdị Linux ha kachasị.
Ihe nhazi 486 DX
AntiX bụ nkesa Linux ọzọ chọrọ ihe ole na ole, ma yanan n'usoro nke nhazi dị ka usoro RAM, ka anyị nwee ike iwunye ya na ọtụtụ kọmputa site na ngwụsị afọ 90. AntiX gụnyere dị ka ngwa ndị etinyere na ụlọ ọrụ LibreOffice, ihe nchọgharị Iceweasol, onye ahịa ozi Claws ... ngwa anyị ga - eji rụọ ọrụ na desktọọpụ dabere na GNOME akpọ IceWM.
Obere ihe AntiX chọrọ
64MB RAM, 128MB kwadoro.
Otu n'ime njirimara nke mere Lubuntu ka ọ bụrụ otu nkesa kachasị mma maka kọmpụta na-esighi ike bụ na mmelite na-aga Ubuntu aka, ebe ọ bụ na ọ bụ n'ezie Ubuntu nwere gburugburu LXDE desktọọpụ e mere maka kọmputa ndị nwere obere akụ. N'ihi obodo dị n'azụ Ubuntu, anyị agaghị enwe nsogbu ọ bụla gbasara nkwado, mmelite, akụrụngwa, ngwa ... Ọ dị maka kọmputa 32-bit na 64-bit.
Pentium II, Pentium III kwadoro
192 MB nke Ram
Anyị enweghị ike ịkọwa Lubuntu ma chefuo nwanne ya nwoke nke okenye, Xubuntu, nkesa Ubuntu yana gburugburu desktọọpụ Xfce. N'adịghị ka Lubuntu gị, Ihe Xubuntu choro di elu, ma ọ ka zuru oke maka kọmputa nwere obere ego.
Ihe chọrọ Xubuntu
Pentium III, Pentium IV kwadoro
Nhazi ọsọ ọsọ: 800 MHz
4 GB nke ohere na draịvụ ike anyị.
Ube OS / Clementine OS
Ọ bụghị nkesa Linux niile dị ka otu. Ube OS na-enye anyị ihe mara mma yiri nke ahụ dị na sistemụ arụmọrụ Apple macOS. Ọ dị nwute na afọ ole na ole anyị enweghị ike ịchọta nkesa ndị a iji budata, yabụ anyị ga-elele sava ndị ọzọ. Enwere ike ime nwụnye site na CD, DVD ma ọ bụ pendrive.
Ube OS chọrọ
Pentium nke Atọ
8 GB diski ike
Otu n'ime distros nke nweela ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya bụ Elementary n'ihi obere ego ọ chọrọ, ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ịwụnye ya na kọmputa site na ngwụsị afọ 90, mana na ndị dị ugbu a gburugburu 10 afọ na-enweghị nsogbu ọ bụla. Njirimara onye ọrụ yiri macOS, yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ a dochie anya ube OS ma ọ bụ Clementine OS nke a bụ ihe ngwọta gị.
Elementary OS chọrọ
1 GHz x86 nhazi
5 GB nke ohere diski ike
CD, DVD ma ọ bụ USB ọdụ ụgbọ mmiri na-agụ maka echichi.
Download elementrị OS
Linux Lite dabere na Ubuntu ma nwee ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ndị a kacha eji dị ka ihe nchọgharị Firefox, Libre Office, VLC player, GIMP onye editọ eserese, ndị ahịa ahịa ozi Thunderbird ... Ọnọdụ eserese ga-echetara anyị interface nke Windows XP maka ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bụbu ndị ọrụ nke ụdị Windows a, ọ gaghị efu gị ịmegharị ngwa ngwa. Bụ dị maka kọmputa 32-bit na 64-bit.
Linux Lite chọrọ
Ngwa 700 MHz
Ihe osise 1.024 x 768
Budata Linux Lite
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ikesa Linux fechaa
Daalụ maka ozi ahụ, emechara nke ọma
Mmanya a agaghị eme ka isi ọwụwa ma ọ bụ ahụ erughị ala na-eri ya
Anyị nyochaa ọhụrụ iPhone 8 Plus n'ụzọ zuru ezu